Rinjiga Rinjiga Faahfaahinta Wanaagsan
Bandhigga Sannadlaha ee Maple Dahabiga ah!
Nanchang Fontainebleau Qalabka Paiting Industrial Co., Ltd wuxuu leeyahay kulan sanadle ah dhowaan. Dad badan oo dhalinyaro ah ayaa ku kala fogaanaya kooxdan, waxaana aaminsanahay in Fontainebleau ay noqon doonto xulashada dadka ee wanaagsan. Haddaad wax dan ah leedahay, kaalay oo nagu soo biir!
Caday Rinji Faneed ayaa Safar ku tagaya Boqortooyada Midowday
Warshadda burushka rinjiga farshaxanka ee Golden Maple ayaa dhammeystiray 10000 nooc oo burush ah iyo kartoonadan oo markab diyaar u ah Ingiriiska. U qaabee nashqadeynta buraashka macmiilkayaga, haddii aad hayso wax codsi OEM ah fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Sidee bilowgu u iibsadaan burush rinji farshaxan-biyood? Kuwa soo socdaa waa cabiro muhiim ah oo aan soo koobay markii aan iibsanayay burushkan. Marka hore, qaabka burushka Guud ahaan, burushka wareega ayaa loo isticmaalaa inta badan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa loo qaybin karaa, sidaa darteed halkan ku sii faahfaahin maayo ....
Noocyada burush rinji ee ugu da'da yar ee inta badan aan u isticmaalno rinjiyeynta waa sida soo socota: Nooca ugu horreeya waa fiyuusta dabiiciga ah, oo ah bristles Oo ay ku jiraan bristles, timo yey, timaha mink iyo wixii la mid ah. Qaybta labaad waa faybar kiimiko ah. Waxaan badanaa isticmaalnaa naylon. Bristles burush rinjiyeyn cusub oo cusub ayaa loo iibsaday si loo sameeyo ...
Qaabka gubashada Burushka mid ka mid burushka ka soo burush oo dab ku gub. Waxa jira ur gubanaya inta lagu jiro hawsha gubashada, waxayna isu rogaysaa dambas ka dib gubashada. Tani waa bristles dhabta ah. Burushka been abuurka ahi waa kuwo aan dhadhamin ama waxay leeyihiin ur caag ah markay gubanayaan. Kadib markii ...
Sidee loo kala saaraa burushka burushka iyo burushka nylon?
Eeg qaybta iskutallaabta Qaybta naylon iskutallaabtu way dhalaalaysaa, laakiin cirridku ma aha Habkani waa lagu ogaan karaa indhaha, laakiin tayada naylonku waa jilicsan tahay, qaybta iskutallaabtuna way yar tahay, sidaa darteed waxay umuuqataa inaanay ka duwanaanayn dufanka doofaarka. Markaad eegto qaybta iskutallaabta, m ...